९ दिनमा ७ गुणाले बढ्यो बालबालिकामा संक्रमण, काठमाडौंका अस्पतालमा बालबालिका बिरामीले भरिन थाले « Etajakhabar
९ दिनमा ७ गुणाले बढ्यो बालबालिकामा संक्रमण, काठमाडौंका अस्पतालमा बालबालिका बिरामीले भरिन थाले
काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा ३५ सय ५३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १५ हजार ८१ जनामा गरिएको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणबाट यो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
यस्तैगरी, पछिल्लो २४ घण्टामा दुई सय ७१ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने एक जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल १४ हजार तीन सय ४० जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । साथै सरकारले पछिल्लो एक दिनमा तीन लाख ५६ हजार चार सय जनालाई भ्याक्सिन लगाएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौंमा मात्रै १४४९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै ललितपुरमा ३१७ र भक्तपुरमा १५० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल सक्रिय संक्रमितमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै आधा बढी संक्रमित रहेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल काठमाडौंमा ५ हजार ८४२ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने ललितपुरमा १५९१ र भक्तपुरमा ९६३ जना रहेका छन् । हाल देशभर १४ हजार ३४० जना कुल सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । यस हिसावले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सक्रिय संक्रमित ८ हजार ३९६ जना रहेका छन् ।
पालमा कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै जाँदा संक्रमित हुने बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो ९ दिनको तथ्यांक हेर्ने हो भने संक्रमित हुने बालबालिकाको संख्या ७ गुणाले वृद्धि भएको छ । २१ पुसमा १० वर्षभन्दा मुनिका ७ जना बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । तर, २९ पुसमा उक्त संख्या उकालो लाग्दै ४९ पुगेको छ ।
बालबालिकामा संक्रमणदर बढ्दै जानुमा मुख्य कारण नै खोपको पहुँचमा बालबालिका नहुनु बालरोग विशेषज्ञहरु बताउँछन् ।उसो त अस्पतालमा शं’का’स्प’द लक्षण भएका बालबालिकाको भर्ना दर बढ्दै गएको छ ।
कान्तिबाल अस्पतालका निर्देशक डा. अजित रायमाझी पछिल्ला केही दिनयता जस्तै लक्षण लिएर आउने बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि भएको बताउँछन् । बालरोग विशेषज्ञहरुको अनुमान छ – ओमिक्रोनको लहरबाट धेरै बालबालिका संक्रमित हुन सक्छन् ।
हाल कान्तिबाल अस्पतालमा १४ जना शं’का’स्प’द बालबालिकालाई भर्ना गरिएर राखिएको छ भने दुई जना बालबालिका पोजेटिभ छन् । तर, यो संख्या करिब १० दिन अगाडि शं’का’स्प’द एक दुई जनामा सीमित थियो । अस्पतालमा भर्ना भएका शंस्कापद केसहरु १० वर्षभन्दा तलका बालबालिका छन् । ‘केही दिनयता कोरोनाको लक्षण भएका बालबालिका भर्ना हुने क्रम बढ्दो छ,’ डा. रायमाझीले भने, ‘शं’का’स्प’द बालबालिका थपिँदै जानुले चिन्ता थपिदिएको छ ।’ डा. रायमाझीका अनुसार १४ वटा शं’का’स्प’द केसहरुको पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ ।
सिद्धार्थ शुक्लाका फ्यानहरूलाई परिवारको विशेष अपील, शहनाज गिलले पनि गरिन यस्तो आग्रह
यस्तो बनाए सीके राउतका कार्यकर्ताले गाडी, मेयर र सांसद सहित ४ जना घाइते
नेता वामदेव गौतम र पत्नी तुलसालाई कोभिड संक्रमण पुष्टि, यस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था
श्रीमान छोडेपछि जेठाजुले ब’ला’त्का’र गरिरहे त्यसपछि जे भयो त्यो कसैले पनि सोच्न सक्दैनन !
आफैले बनाएको नियमको यसरी धज्जी उडाए मन्त्री साहले
भारतीय टिमका स्टार अलराउन्डर युवराज सिंह पिता बनेका छन् । पूर्व क्रिकेटरले सामाजिक सञ्जाल मार्फत
एजेन्सी । चर्चित टिभी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला अब यो संसारमा छैनन् । तर उनका फ्यानहरुले
काठमाडौं । आज बिहानैदेखि मौसम खराब बनेको छ । हाल सुदुर पश्चिम प्रदेश र गण्डकी
काठमाडौ । मधेश प्रदेशमा डा सीके राउतका कार्यकर्ताको गतिविधि बढ्दै गएको छ । उनीहरुले बुधवार